Basola umbango woBukhosi ngesiteleka kwaMbotho – Bayede News
KUFUFUSA ukhukhulelangoqo wesiteleka somphakathi esizweni
Posted on 12 July 2019 by Bayede-News
UMnu uMthetheleli Mbotho
KUFUFUSA ukhukhulelangoqo wesiteleka somphakathi esizweni sakwaMbotho eHarding ngenxa yokugqoza kwentuthuko okuthiwa sekunesikhathi eside umphakathi ubika ezinhlakeni ezisemthethweni kodwa kube nhlanga zimuka nomoya. Ilungu lomphakathi elikhulume neBAYEDE maphakathi nesonto lacela ukungadalulwa lithe okunye okubonakala kugqugquzela lesi siteleka umbango woBukhosi endaweni okugcina ngokuthi nabalethe intuthuko bangazi ukuthi kumele baxhumane nobani njengoba iBambabukhosi kukhona abangalamukeli emphakathini nasemndenini.
Phambilini umphakathi walapha uke wavuka umbhejazane wavala imigwaqo ukhala ngakho ukugqoza kwentuthuko endaweni. Ikhansela lendawo uMnu uWiseman Mbotho ekhuluma naleli phephandaba wathi akusasebenzeki esizweni ngoba akekho umuntu oyinhloko. “Abantu bafuna ukuletha intuthuko kodwa akwenzeki, nami njengekhansela sengibonakala njengomuntu ongasebenzi ngoba ezinye izinto kumele zidlule eNkosini,” kuzikhalela uMbotho.Umbango woBukhosi kwaMbotho uphakathi kwenye yamadodana eNkosi uMbotho uMthetheleli owayegwetshwe udilikajele neminyaka engama-32 ngonyaka wezi-2000 ngecala lokubulala kanye noNkk uMaMendu Mbotho oyingoduso kamufi uValela Mbotho. Okushubisa isimo ngoBukhosi kulesi sizwe kube ukudedelwa ejele kukaMthetheleli.
Amanye amalungu omndeni athi uMthetheleli nguye ofanelwe isihlalo ngoba uzalwa yiNkosi eyashona kuNdlunkulu uMaMtshali owalotsholwa isizwe. Ngakolunye uhlangothi kuthiwa uValela sasivele singamfanele isihlalo ngoba unina wayengalotsholwanga isizwe futhi nengoduso yakhe yayingalotsholiwe yaqedwa kwaMbotho njengoba isabiza nesibongo sayo sakwaMendu.Emuva kokudedelwa kukaMthetheleli ejele ngoMasingana wezi-2018 umndeni ube nochungechunge lwemihlangano naboMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uzama ukuthi uMnyango wamukele uMthetheleli ukuze athathe isihlalo njengoba sasingasenamuntu emuva kokushona kukaValela.
Kwamanye amaminithi omhlangano uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal, uthi uMthetheleli akafanelwe ukuba yiNkosi kodwa umndeni kumele ulobole uMaMendu abe yinkosi njengoba wayeyingoduso yeBambabukhosi uValela ukuze kube uyena othatha uBukhosi kwaMbotho.UMnyango waveza ukuthi uMthetheleli angeke akwazi ukuba yiNkosi ngoba wagwetshwa futhi wahlala ejele isikhathi eside.
Umndeni uthi zonke izinhloko zakwaMbotho sezadlula emhlabeni, ogcine ukushona uMshikashika Mbotho naye obelwa ukuthi uMthetheleli abekwe esihlalweni. UMshikashika kuthiwa uyena owahlanganisa amaMbotho ukuze kubhalelwe uMnyango waziswe ngesinqumo somndeni sokunikeza uMthetheleli isihlalo. Lolu daba seluseNkantolo eNkulu eMgungundlovu. Ekhuluma neBAYEDE izolo uMthetheleli uthe uwuzwile umoya wesiteleka esifufusayo sentuthuko emphakathini kodwa wanganda kakhulu ngalokho. Agxile kukho ukuthi ufisa uMphathiswa omusha Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uMnu uSipho Hlomuka angenelele kulolu daba ngoba kuze kube yimanje abakutholi ukusizakala.
“Ngendlela engibona ngayo izinto uMnyango awunandaba noBukhosi ngisho nokuzaleka kwami. Okubuhlungu ukuthi abayizikhulu basebenzisa amagama oNdunankulu uma bekhipha izinqumo kodwa uthole ukuthi labo okusetshenziswa amagama abo bona abazi lutho,” kusho uMbotho. Sekukaningi leli phephandaba libika ngalolu daba.
ISigaba 21 (1) (a) somthetho iKwaZulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act, 2005 sicacisa ukuthi: “Umholi womdabu angasuswa esihlalweni uma elahlwe yicala isigwebo salo kwaba ukudonsa ejele isikhathi esiyizinyanga ezili-12 ngaphandle kokunikwa ilungelo lokuthi akhokhe inhlawulo. Kuyaye kube semahlombe omndeni ukuthi ukhethe ozobamba, uma kuhluleka lapho uNdunankulu angasebenzisa iSigaba 30 (6) salo Mthetho ukuthatha iBambabukhosi njengobhekelele isizwe osemthethweni ngokuxhumana neNdlu Yobuholi Bomdabu noMphathiswa Womnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu esifundazweni.”